Eden Hazard oo ka jawaabay wax ka jira wararka sheegaya inuu heshiis buuxa la gaaray kooxda Real Madrid – Gool FM
(London) 24 Maarso 2019. Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea ee Eden Hazard ayaa shaaca ka qaaday inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya inuu heshiis waqti dheer qalinka ugu duugay naadiga Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain.
Hazard ayaa kaliya hal sano kaga harsan tahay qandaraaskiisa garoonka Stamford Bridge, waxaana ay taasi keentay in si joogta ah la isku weydaarsado inuu u wareego kooxda reer Spain.
War shalay soo baxay ayaa sheegayay in Hazard uu heshiis shan sanadood ah qalinka ugu duugay kooxda Real Madrid, laakiin xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa ku adkeysanaya in sheegashadu ay tahay mid aan run ahayn.
Intii uu ku guda jiray waajibaadka xulkiisa qaranka Belgium ayuu 28-sano jirkaan Suxufiyiinta u sheegay: “Wali waxba ma jiraan, anigu waxaan diiradda saarayaa kulanka aan wajahayno Cyprus, taasi waa waxa kaliya ee aan hadda ka shaqaynayo”.
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay Hazard ku iibinayso adduun dhan 98.5 milyan oo gini.